परिकार Archives - Entertainment Khabar
पाककलाको रियालिटी शो ‘सेफ नेपाल’ आउँदै, प्रियंका कार्यकारी निर्माता
काठमाडौं । पाककला सम्बन्धी टेलिभिजन रियालिटी शो ‘सेफ नेपाल’ प्रसारणमा आउने भएको छ । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको कार्यकारी निर्माण रहने शोको शुक्रबार भक्तपुरमा औपचारिक घोषणा गरियो । यसअघि हिमालय टीभीमा रोडिज रियालिटी शो निर्देशन गरेका सिमोस सुनुवारले ‘सेफ नेपाल’लाई निर्देशन गर्ने भएका छन् । ‘अरुले गर्न नसकेको काम हामीले अघि बढाएका छौं,’ सुनुवारले भने । कार्यक्रमको औपचारिक घोषणासँगै प्रतिस्पर्धीक...
नेपालका आदिवासी थारु समुदायको प्रकृतिसँग अति नजिक सम्बन्ध रहेको मानिन्छ । यो समुदायका मानिसको भाषा, रहनसहन, जीवनशैली अति फरक र रोचक मानिन्छ । थारु समुदाय केवल खानपान र मनोरञ्जनमा मात्र सीमित छैन । यो समुदायका मानिसहरु परिश्रमका पारखी पनि मानिन्छन् र वर्षभरी खेतीपाती कै काममा व्यस्त हुन्छन् । थारु जातिले संस्कृतिमा अति धनी भएकाले प्रत्येक महिना उनीहरु विभिन्न पर्व मनाउँछन् । कुनै महिना व...
काठमाडौं : भनाइ नै छ, ‘होटल तथा रेष्टुराँमा राखिएका मेनुमा माथिदेखि तलसम्म आँखा डुलाए पनि धेरैले माग्ने भनेको मःम नै हो।’ साथीहरू भेट हुँदा खाने खाजामा पनि चल्तीको मःम नै पर्छ। छिटो तयार हुने, तयार भएपछि केही समय राखेर खान पनि सकिने र प्रायः होटलमा पाइने भएकाले यो नेपालीका लागि प्रिय खाजा नै हो। मःम नेपालसहित उत्तर भारत र तिब्बतमा खाजाको सूचीमा प्रचलित मानिन्छ। मःम विश्वमा नै लोकप्रिय डम्प्ल...
१९ वर्ष लामो इतिहास बोकेको स्यान्को आफैंमा ‘स्ट्रिट’ देखि उदय भएको जनप्रिय ‘कर्पोरेट कल्चर’ को एउटा दृष्टान्त हो । संस्थापक सीईओ ज्ञानप्रकाश राई स्यान्कोलाई आफ्नै शैलीमा ‘भोकको व्यापार’ भन्छन् । खोटाङबाट काठमाडौं छिरेका युवा ज्ञानप्रकाश राईले सन् २००२ मा बानेश्वरमा सानो स्टल सुरु गरे । नाम दिए, स्यान्को कट्टी रोल । त्यसमा ५ लाखको लगानी गरे । ‘स्ट्रिट फुड’ कट्टी रोललाई त्यति बेला उनी ठेलामा बे...
सुनसरी , माघ १ । सुनसरीका कृषहरुले मकै , पुष्प , सुपाडी , मरिच, अदुवा, धान र तरकारी खेती अनि पशुपंक्षी र माछा पालन व्यावसाय फस्टाउने भएकोले जिल्लाको भौगोलिक वतावरण अनुसार कृषी क्षेत्रमा लगानी गरेको कारणले मनग्य आम्दानी गरेका छन । कृषी कर्मबाट मनग्य मात्रामा आम्दानी गरेको उनीहरुल्ै बताएका छन । नगदेवालीको रुपमा रहेको टमाटर , काउली लगायतका तरकारीको उत्पादनबाट मनग्य मात्रामा स्वदेशमा नै आम्दानी...
ग्रिन टी तौल कम गर्न, उमेर बढाउन तथा तनाव कम गर्न उपयोगी मानिन्छ, तर छाला र केशका लागि पनि यसले विशेष काम गर्छ। ग्रिन टीमा अनेकौं विविधता पाइन्छ। यसमा एप्पल ग्रिन टी विशेष हुन्छ। एप्पल ग्रिन टीमा मिनरल तथा भिटामिन सी प्रशस्त हुने हुँदा त्यसले छालालाई पुनर्जीवित गर्छ। ग्रिन टीले आँखामुनिको कालो घेरा, आँखा सुन्निएको तथा आँखामुनिको रिंकल हटाउँछ। यसका लागि ग्रिन टीको पाउँचलाई पानीमा हालेर पाँच म...
तपाईं आफ्नो दैनिक खानामा दही समावेश गर्नुहुन्छ ? लसुन नि ? यसमा पक्कै पनि तपाईंको जवाफ सकारात्मक आउनेछ। लसुन त हाम्रो खानाको अभिन्न हिस्सा नै भयो । तरकारीमा लसुन नभई हुन्न । त्यसैले त यो भान्सामा अनिवार्य हुनेगर्छ । तपाईंलाई हेक्का हुनुपर्छ, दही स्वादिलो मात्र होइन अत्यन्तै लाभदायक पनि हुन्छ। खासगरी पेटको लागि दही सेवन उपयोगी मानिन्छ। दहीमा भएको प्रोबायोटिक तत्वले खाना पचाउनमा मद्दत गर्छ । यसैग...
नेपालीहरुको महान चाड मध्ये एक हो, विजया दशमी अर्थात दशैं । जब दशैं आउँछ तब नेपाली फिल्म ‘मुग्लान’ मा समावेश गीत सर्वाधिक घन्किने गरेको छ । यो गीतले हरेक नेपालीलाई दशैं सम्झाउँछ, दशैं आएको अनुभूति गराउँछ । जब दशैं नजिकिँदै जान्छ तब घर-गाउँ, शहर-बजार जताततै यही गीतमात्र बज्ने गरेको छ । यो गीतलाई विस्थापित गर्ने अहिलेसम्म अरु दशैं गीत समेत बन्न सकेका छैनन् । यसपाली पनि घटस्थापनादेखि नै यो गीत सर...
एउटा निश्चित चक्रमा मासिक श्राव हुनु प्राकृतिक र स्वभाविक प्रक्रिया हो । यद्यपि कतिपयको हकमा भने यस्तो हुँदैन । कहिले छिटो वा कहिले ढिलो मासिक स्राव हुन्छ । यसरी अनियमित मासिक श्राव हुनुमा एक मात्र कारण छैन । अनेक कारणले मासिक श्रावमा गडवडी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वायु प्रदूषणले पनि महिलाको मासिक श्राव गडवडी हुनसक्छ । वायुप्रदूषणले गर्दा हर्मोनमा परिवर्तन हुने र त्यसको असर महिनावरीमा देखिने चिकि...
खानाबाट आनन्द लिन, स्वादको अनुभव गर्न र स्वास्थ्य राम्रो बनाउन पाककला महत्वपूर्ण छ । सामान्य लाग्छ, तर पाककला हाम्रो स्वास्थ्य र स्वादसँग अभिन्न रुपमा जोडिएको विषय हो खाना पकाउनु आफैँमा एउटा कला हो । जसरी एउटा सुन्दर कलाकारको मेहनतले एउटा सुन्दर कलाकृतिको रचना हुन्छ, त्यसरी नै एउटा मेहनती गृहिणीले कलात्मक र मीठो खाना तयार पार्न सक्छिन् । खाना पकाउने कला केटामान्छे होस् या केटीमान्छे दुवैका लागि क...